यो कस्तो विडम्बना ? एउटै घरका पाँचै सदस्य अपाङ्ग - Everest Dainik - News from Nepal
यो कस्तो विडम्बना ? एउटै घरका पाँचै सदस्य अपाङ्ग
कुश्मादेवीलार्इ घर चलाउन धौधौ
महोत्तरी । गौशाला ११ की ५५ वर्षीया कुश्मीदेवीकी बाटो छेउमै एउटा सानो झुप्री छ । जसमा पाँच जनाको परिवार बसोबास गर्छन् ।
याे पनि पढ्नुस ढिस्कोले परिदाँ ४ बालिका घाइते, १ को अवस्था गम्भीर
याे पनि पढ्नुस होली खेल्ने क्रममा झडप, तीन जना घाइते
याे पनि पढ्नुस प्रचण्डले कम्युनिष्ट नेता निर्मल लामाको १८औं स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्ने
घाउ निको भएपछि २०५० देखि सोही अस्पतालमा जुत्ता सिलाएर परिवार पाल्दै आएका रामनन्दनलाई गत वैशाखदेखि अस्पतालले काम दिन छाडेपछि पछिल्लो समयमा आएर आर्थिक अवस्था खस्किँदा पनि सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय फर्केर नआएको दुखेसो उहाँले सुनाउनुभयो ।रासस